Mhedzisiro yesarudzo haina kujeka mushure mekunge Vanhu veZambia vavhota
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mhedzisiro yesarudzo haina kujeka mushure mekunge Vanhu veZambia vavhota
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Trending Now • Akasiyana Nhau • Zimbabwe Breaking News
Zambia rakavhota. Vakateverwa nemumiriri weDemocratic, Harry Kalaba (64.9%) naFred M'membe weSocialist Party (33.1%).
Iye zvino mutungamiri weZambia, VaEdgar Lungu vari kuda kukwikwidza musarudzo.
Anomupikisa ndiHakainde Hichilema, anozivikanwa bhizinesi maneja kuZambia.
Mapuratifomu ekutaurirana, seSKYPE kana WhatsApp, Facebook kana Twitter anoramba akavharirwa muzvikamu zveZambia panguva ino, zvisinei mamwe matunhu anoita kunge ari online zvakare maererano eTurboNews inbound internet traffic traffic.
Kutanga kuverengeka kusiri pamutemo kuri kuuya kubva kumatunhu akasiyana siyana, zvisinei manzwi ezveruramisiro uye asina kunaka mhedzisiro anotumira kuZambia social media chats.
Kuverengera kwekupedzisira kwevhoti kuri kuitika iye zvino munzvimbo dzakasiyana dzekuvhotera munyika yose. "Ndokumbira utarise kwaunowana kana uchigovana ruzivo nezve sarudzo yesarudzo dzemuna 2021 kuti urege kufambisa mashoko enhema uye asiri iwo." inzvimbo neChristian Churches Monitoring Group.
Sarudzo dzemu Africa Dzinosarudzwa munzvimbo dzekumaruwa uye Dzinokwikwidzwa mumaguta. Aya ndiwo mashoko akataurwa naDr Walter Mzembi, vaimbova gurukota rezveKushanya muZimbabwe uye nhengo yeExecutive yeAfrican Tourism Board. Anodaidza mazwi ake: Mzembi electoral logic!
Nezuro husiku akatumira tweet: "Kumirira mhedzisiro muZambia - nziyo dze" Tinoda Shanduko! " - ndiri kunzwa zvakanaka here? Kana kuti nzeve dzangu dzakasungwa here? Zvinoshamisa zvechokwadi!
Kuwanda kusingaenzaniswi kuverenga kuri kufungidzira shanduko yehurumende muZambia panguva ino.
Mutungamiri weZambia anosarudzwa kuburikidza neese-maviri system. Pakati penhengo zana nemakumi manomwe nenomwe dzeParamende yeNational, gumi nemashanu vanosvika zana nemakumi matanhatu nenhanhatu vanosarudzwa neyekutanga-iyo-posvo system mumatunhu-nhengo imwe chete. Vamwe vasere vanogadzwa neMutungamiriri wenyika uye vamwe vatatu vari nhengo dzechigaro: mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Mutauri, uye mutevedzeri wemutauri akasarudzwa kubva kunze kweNational Assembly. Mutevedzeri wechipiri mutauri anosarudzwa kubva kunhengo dzakasarudzwa dzeimba.
Nguva yekuvhota muZambia i18, nepo nhengo dzeNational Assembly dzinofanirwa kunge dzichidarika makumi maviri nerimwe.
Musi wa28 Chikunguru Munyori Mukuru weUPND Batuke Imenda akaburitsa chirevo chekuti bato rakanyadziswa nemasangano ehurumende aishandiswa neMutungamiri Lungu kurambidza mumiriri weUPND mutungamiriri wenyika Hakainde Hichilema kubva pakurwira.
Musi wa30 Chikunguru Hichilema nechikwata chake chemushandirapamwe vakatadziswa kupinda muChipata uye vakasungwa pamugwagwa weChipata Airport. Hichilema asati asvika kuChipata, mapurisa akange asunga misodzi kuvatsigiri vake. Musi wa3 Nyamavhuvhu mapurisa ari Mbala akavharira Hichilema nechikwata chake chemushandirapamwe kuti vapinde mutaundi, nemapurisa achiti aida mvumo yekupinda.
Ziva isangano risiri rehurumende, iro rinotsigira nekusimudzira kodzero dzevavhoti dzinoda kubva kuZambia kuti dzibvise internet richiti: “Sarudzo ndeyesarudzo / yevavhoti. #UnblockTheInternet Sei uchivhara internet? Kushaikwa kwekujekesa kunokanganisa mhedzisiro yesarudzo iyi.
Vavhoti vepamusoro vanobuda kazhinji havasi chiratidzo chakanaka kune vari pachigaro, uye vavhoti vatori vaive vakakwira maererano nemishumo yemuno.
Ndinodada nevaZambia nekuti TAKaratidza
Mutsetse wevavhoti muZambia nezuro
Manzwiro ari Zambia yakasimba mukusapokana pakuedza kubiridzira sarudzo. Iyi mota yakawanikwa iine mavhoti esarudzo anonzi aibiridzira. Vavhoti vakasiya mitsara yavo kuti vagadzirise nyaya iyi nenzira isingade chero tsananguro.
Manzwiro ari muZambia akasimba mukupesana nechero kuyedza kubiridzira sarudzo.
Iyi mota yakawanikwa iine mavhoti esarudzo anonzi aibiridzira.
Vavhoti vakasiya mitsara yavo kuti vagadzirise nyaya iyi nenzira isingade chero kutsanangurwa!
MaZambia ari kuda kuchinja pic.twitter.com/g6ZiZwH7ei
Meseji kubva kuZambia inoti:
Mangwanani akanaka Zambia! Data iri kuuya iri yakanaka kwazvo uye kuda kwevanhu kuri pachena. Asi chenjera - kana hurumende ichibuda ikavhunduka, inogona kuita matanho ekupererwa. Saka ramba wakadzikama uye wakanangisa. Isu tichadzivirira vhoti yedu nerunyararo uye nerudo mumoyo medu. Shanduko iri HERE.
Meseji inokurumidza kubva kuZambia inoti Tinodaidzira kuZICTA kuti ivhure pakarepo internet kuitira kuti vagari vatevere mafambiro esarudzo uye vaenderere mberi nehupenyu hwavo vasingavhiringidzwe. Zvinonyadzisa kuti kunyangwe PF yakaraira kudzima iri kupa zvirevo zvisina kudzivirirwa kuburikidza neVPN.
Zambia rapfuura yakachema kuimba kwayo Mutungamiriri wenyika, VaKenneth Kaunda: Runyararo, Tourism, Shanduko Yemamiriro ekunze yaive rwiyo rwake.
Zvizhinji pasarudzo yeZambia tinya pano.